कोरोना संकटका बीच पनि सम्पत्ति थप्न सफल विश्वका ५ अर्बपतिहरु (भिडियाेसहित)
केन्द्रबिन्दु संवाददाता २ माघ २०७७
कोरोना महामारी एक वर्षदेखि विश्वभर नै फैलिएको छ । फैलिएको एक वर्षसम्म पनि यसको जोखिम कम हुन सकेको छैन। अहिले पनि भाइरसको जोखिम उतिकै छ । महामारीका कारण विश्वका ठूलाठूला उद्योग, व्यापार व्यवसाय बन्द हुन पुगे । यसरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने क्षेत्र नै ठप्प भएकाले विश्वको अर्थतन्त्रमा नै संकटमा परेको छ ।
कोरोनाका कारण उद्योग, व्यापार व्यवसाय बन्द भएकाले विश्वभरका लाखौं मानिसहरुले रोजगार गुमाउनु परेको छ भने विश्वभर नै गरिबी पनि बढेको छ । कोरोना कै कारण सामाजिक जनजीवन समेत कष्टकर बन्न पुगेको छ । अहिले पनि यसको जोखिम कम भएको छैन । तर विस्तारै सबै क्षेत्रहरु सुचारु हुन थालेका छन् । आर्थिक गतिविधि हुने क्षेत्रहरु सुचारु हुन थालेकाले अब अर्थतन्त्रले गति लिने संकेत देखिएको छ । यता आर्थिक संकटका कारण हजारौं व्यवसायहरु बन्द हुँदा लाखौं मानिसहरुले रोजगारी गुमाएका छन् ।
तर यता कोरोना महामारीकै बीचमा पनि केही व्यक्तिहरु आर्थिक संकट होइन, आर्थिक उर्पाजन अर्थात् धन बढाएर धनी बनेका छन् । कोरोनाले विश्वलाई आर्थिक संकटमा पुर्याएको अवस्थामा केही उद्योगीहरुलाई भने कमाउने अवसर मिलेको छ । यहि कोरोना महामारीको बीचमा नै विश्वका ६० प्रतिशतभन्दा बढी अर्बपतिहरु झन बढी धनी बनेका छन् । विश्वले २०२० लाई कालो वर्षको रुपमा लिए पनि ५ अर्बपतिहरुले भने सन् २०२० मा नै अझ बढी धनी भएका हुन् । यसरी धनी बन्ने ५ जनाको कुल सम्पत्ति ३१०.५ अर्ब डलर पुगेको छ ।
यी हुन कोरोना महामारीका बीचमा पनि धनी बन्ने पाँच अर्बपतिहरु
१.जेफ बेजोस, अमेजनका संस्थापक तथा सीइओ
कोरोनाको महासंकटको अवस्थामा पनि धनी बन्ने पहिलो व्यक्ति अमेजनका संस्थापक तथा सीइओ जेफ बेजोस रहेका छन् । जेफ बेजोस ती व्यक्ति हुन् जसले सन् २०२० को शुरुवातमा विश्वको सबैभन्दा धनी व्यक्ति बनेका थिए । यो वर्षको अन्त्यसम्म पनि उनै सबैभन्दा धनी व्यक्ति रहेका छन् । जेफ बेजोस अनलाइन सपिङ प्लेटफर्म अमेजनका संस्थापक मात्रै होइनन् , उनी त्यसका साथै अमेरिकी अखबार ‘द वासिंटन पोस्ट’का मालिक पनि हुन् । उनले २०२० को वर्ष आफ्नो कुल सम्पत्तिमा ७२ अर्ब डलर थप गरेका छन् । कोरोना महामारीका बिचमा पनि ७२ अर्ब डलर थप हुनु भनेको अनलाइन खरिद कारोबार उच्च हुनु हो । लकडाउनमा सम्पूर्ण पसल बन्द भएका कारण मानिसहरुले अनलाइनमा मार्फत नै अत्याधिक मात्रामा खरिद गर्ने गरेका थिए ।
केही महिना अगाडि जेफ बेजोसको कुल सम्पत्तिले २०० अर्ब डलरको अंक पार गरेको थियो । तर अहिले उनको कुल सम्पत्ति १८७ अर्ब डलर कायम छ । जेफ बेजोसले सामाजिक कार्यमा पनि आफ्नो योगदान दिइरहेका छन् । गत फेब्रुअरीमा उनले १० अर्ब डलर जलवायु परिवर्तनसँग लड्नका लागि दान दिएका थिए । त्यसैगरी नोभेम्बर महिनामा ८० करोड डलर उनले पर्यावरण सम्बन्धि काम गर्ने संस्थालाई दिएका थिए ।
२. एलन मस्क, टेस्लाका सह–संस्थापक तथा सीइओ
स्पेस एक्सका संस्थापक तथा टेस्लाका सीइओ एलन मस्कको सम्पत्तिमा सन् २०२० मा १४० अर्ब डलर थपिएको छ । ब्लुमबर्गका अनुसार पछिल्लो सोमबार उनको कुल सम्पत्ति १ खर्ब ६७ अर्ब डलर पुगेको छ । यसका साथै एलन मस्क अर्बपतिहरुको सूचिमा माथि चढेका छन् र नोभेम्बरमा बिल गेट्सलाई पछि पार्दै विश्वको सबैभन्दा धनीको सूचीमा दोस्रोस्थानमा पुगेका छन् । उनीभन्दा अगाडि अमेजनका संस्थापक जेफ बेजोस छन् । फोब्सका अनुसार जबदेखि पत्रिकाले विश्वका धनीहरुको सूची निकाल्न शुरु गर्यो त्यसबेलादेखि हालसम्म कुनै पनि अर्बपतिको एक वर्षमै यति धेरै सम्पत्ति बढेको यो पहिलो पटक हो ।
एलन मस्कको कम्पनी टेस्ला एक इलेक्ट्रिक कार निर्माता कम्पनी हो । यस वर्ष कम्पनीको कारहरु रेकर्ड स्तरमा बिक्री भएका थिए । त्यसैगरी दोस्रोतर्फ कम्पनी स्पेस एक्सले पनि यस वर्ष निकै उपलब्धी हासिल गरेको छ । र, उक्त कम्पनी अन्तरिक्षमा एस्ट्रोनट लञ्च गर्ने पहिलो निजी कम्पनी समेत बनेको छ ।
३. डेन गिलबर्ट, रकेट कम्पनीका अध्यक्ष
५८ वर्षे गिलबर्ट एनबीए क्लिवल्यान्ड क्यावेलियर्स (रकेट कम्पनी)का मालिक तथा अनलाइन मार्केज कम्पनी क्लिवन लोन्सका सहसंस्थापक पनि हुन् । ब्लूमबर्गका अनुसार कोरोना महामारीको बीचमा पनि सन् २०२० मा उनको कुल सम्पत्ति २८.१ अर्ब डलरसम्म बढेको छ । २८.१ अर्ब डलरले बढेर अब उनको कुल सम्पत्ति ३५.३ अर्ब डलर पुगेको छ ।
यसका कारण क्विकन लोन्सको मूल कम्पनी रकेट कम्पनीजले अगष्टमा शेयर तथा अन्य वित्तीय साधनमा सार्वजनिक बिक्री शुरु गरेको थियो । गिलबर्टसँग रकेट कम्पनीजको ८० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व छ । जसको मूल्य ३१ अर्ब डलरभन्दा बढी छ । गिलबर्टको कुल सम्पत्ति एक वर्षमा ६ गुणाले बढेको थियो । जसका कारण क्विकन लोन्सको आइपीओ नै हो ।
४.जोन शनशन, नो फू स्प्रिङका संस्थापक
ब्लुमर्गका अनुसार यो कोरोना महामारीका बीचमा जोन शनशनको कुल सम्पत्ति ६२.७ अर्ब डलरसम्म बढेको थियो । उनको हालको सम्पत्ति ६२.७ अर्ब डलरसम्म बढेर ६९ अर्ब डलर पुगेको छ । जोन गत सेप्टेम्बरमा चीनका सबैभन्दा धनी व्यक्ति बनेका थिए । उनले बोतलबन्द पानीको कम्पनी नो फू स्प्रिङको शेयर सार्वजनिक बिक्री शुरु गरेपछि १.१ अर्बभन्दा बढीको कमाइ गरेका थिए । नो फू स्प्रिङको स्थापना सन् १९९५ मा भएको थियो । जसले एसियामा बोतलबन्द पानीको बजारमा पाँचौं हिस्सालाई नियन्त्रित गर्छ । उनको कम्पनीको मूल्य ७० अर्ब डलर पुगेको छ ।
६६ वर्षे जोन शनशनको कम्पनीमा ८४ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा छ । जसको शेयर मूल्य करिब ६० अर्ब डलर छ । यसका कारण जोन शनशन टेनसेट्सको पोनी मा तथा अलिबाबाको ज्याकमा जस्ता अर्बपतिभन्दा अगाडि निस्कन सफल भएका छन् । उनी अहिले चीनका सबैभन्दा धनी व्यक्ति मात्रै होइन भारतीय अर्बपति मुकेश अम्बानीलाई पछि पार्दै एसियाका सबैभन्दा धनी व्यक्ति बन्न सफल भएका छन् । त्यति मात्रै नभएर उनी भ्याक्सिन बनाउने कम्पनी बेइजिङ बान्टा बायोलोजिकल फार्मेसीका समेत मालिक हुन् । यो कम्पनीले कोभिड १९ का लागि नाकबाट लिने स्प्रे बनाइरहेको छ ।
५. बर्नार्ड अर्नाल्ट, एलबीएमएच ग्रुप मालिक
बर्नार्ड आर्नाल्ट फ्रान्सका सबैभन्दा धनी व्यक्ति हुन् । फोब्सले उनलाई धनीहरुको सूचिमा दोस्रो नम्बरमा राखेको थियो भने ब्लुमर्गले उनलाई चौथो स्थानमा राखेको थियो । लग्जरी सामान निर्माता कम्पनी एलवीएमएचका मालिक अर्नाल्टको कुल सम्पत्ति कोरोना महामारीको सामान गर्दै पनि सन् २०२० को अन्त्यसम्ममा १४६.३ अर्ब डलर पुगेको छ । यस्तो कठिन अवस्थामा पनि उनको सम्पत्ति ३० प्रतिशतले बढेको छ ।
कोरोना महामारीका कारण एलबीएमएचले टिफनी एन्ड कम्पनीलाई अधिग्रहण गर्ने योजना अस्थायी रुपमा रोकीदिएका छन् । तर अक्टोबरमा उनले १५.८ अर्ब डलरमा कम्पनी अधिग्रहणको सम्झौता गरेका छन् । जुन प्रस्तावित मूल्यभन्दा ४० करोड डलर कम हो । दक्षिण कोरिया तथा चीनमा उनका केही उत्पादनहरु ठूलो मात्रामा बिक्री भइरहेका छन् ।
यस्तो संकटको अवस्थामा पनि धनि व्यक्तिहरुको सम्पती बढ्नुले जुन सुकै संकटको घडी समय अनुकूलको व्यापार व्यवसाय भए घाटामा नजाने तथा कमाउने अवसर मिल्ने देखिएको छ ।एजेन्सीकाे सहयाेगमा
प्रकाशित: २ माघ २०७७ १८:१० शुक्रबार
कोरोना संकटमा पनि आफ्नो सम्पत्ति थप्न सफल विश्वका ५ अर्बपतिहरु
कूटनीतिक बिफ्रिङमा अमेरिकी राजदूत अनुपस्थित : भेनेजुयलाको संकटका बारेमा प्रचण्डको अभिव्यक्ति
५० जिल्लाका ७ सय ७५ जनप्रतिनिधिले बुझाए सम्पत्ति विवरण
कति छ गभर्नर अधिकारीको सम्पत्ति ? यस्तो छ विवरण